Afar Kulan Oo Kaliya Ayaa Barcelona Ka Xiga In Ay Markii Saddexaad Ku Guulaysato Saddexda Koob. - Gool24.Net
Afar Kulan Oo Kaliya Ayaa Barcelona Ka Xiga In Ay Markii Saddexaad Ku Guulaysato Saddexda Koob.
April 29, 2019 Mahamoud Batalaale
Barcelona ayaa ah kooxda kaliya ee Spain ka dhisan ee laba jeer oo hore awooday in ay hal xili ciyaareed saddexda koob kuwada guulaysatay waana rekoodh ilaa hadda u diwaan gashan Pep Guardiola iyo Luis Enrique laakiin Valverde ayaa u baahan in uu Barcelona la guulaysato afar kulan oo kaliya si uu rekoodhkan qayb uga noqdo.
Madax waynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa si aan gabasho lahayn u sheegay in hamiga kooxdiisa Barca uu yahay sidii ay saddexda koob ugu guulaysan lahaayeen, waxaana hadda hamigan ka xiga afar kulan oo kaliya.
Barcelona ayaa haddaba soo xidhay baabkii tartan horyaalka La Liga waxayna koobkan qaaday iyada oo saddex kulan baaqi u yihiin waxayna taasi la micno tahay in hadda uu Valverde haysto fursad uu ciyaartoyda da’yarta ama kaydka ku safi doono saddexdan kulan si ay xidigaha muhiimka ahi ugu koobnaadaan afarta kulan ee ka xiga koobabka Copa Del Rey iyo Champions league.
Barcelona waxay Camp Nou ku soo dhawayn doontaa Liverpool waana kulan lagu qeexay in uu yahay kulankii xili ciyaareedkan ugu waynaa kaas oo si buuxda u qeexi kara haddii ay Barca heli doonto fursada ay saddexda koob ugu guulaysan karto.
Valverde iyo kooxdiisa Barcelona waxay haddaba ogyihiin in Liverpool ahayna la mid ahayn dhamaan kooxihii ay xili ciyaareedkan ku soo wajaheen tartamada oo dhan, waxayna Barca doonaysaa in kulanka Camp Nou ay muhiimada ugu wayn siiyaan si ayna xalaad xun ula kulmin kulanka lugta labaad ee Anfield.
Barcelona waxay u baahan tahay in ay soo dhaafto labada kulan ee Liverpool iyo finalka UEFA Champions league si la mid ah finalka Copa Del Rey waana afarta kulan ee ka xiga in ay taariikh cusub oo kale sii abuurto si ay saddexda koob ugu guulaysan karto.
Inkasta oo ayna Valencia la heer ahayn Liverpool, haddana Barcelona waxaa saddexda koob ka hor jooga Liverpool iyo Valencia waxaana u raaci doonta Ajax ama Tottenham haddii ay Liverpool soo dhaafto.
Haddii ay Barcelona ku guulaysato Copa Del Rey waxay u noqon doontaa markii shanaad oo xidhiidh ah ee ay koobkan ku guulaystaan kaas oo taariikh kale noqon doona halka Champions league ay doonayaan in ay markii lixaad ku guulaystaan waxayna isku mid yihiin Liverpool oo iyaduna u tafo xaydan in ay koobkan markii shanaad hanato.
Si kastaba ha ahaatee, Lionel Messi oo bishan April si wayn loo nasiyay ayuu Valverde u arkaa in uu noqon doono xalka kaliya ee ay Liverpool ku soo dhaafi karaan inkasta oo la filayo in Liverpool iyo Barcelona ay qaadan doonaan 180 daqiiqo oo waali ah.